Buy Condo Rent in Golden Valley (ID-666) (33Lks) in ဗဟန်း on ipivi.com
Condo Rent in Golden Valley (ID-666)
Condo for rent in Golden Valley, Bahan Township. Living-room, Three Master Bed-rooms, Dinning, Kitchen and Bath-rooms in 2000 sqft condo area. Condo has five air-conditioners.
Monthly Rent Price - 2500 USD (Nego)
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေတောင်ကြားလမ်းရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုဖြစ်ပါသည်။ ကွန်ဒိုအိမ်ခန်းအကျယ် - ၂၀၀၀ စတုရန်းပေအတွင်း ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းကျယ် သုံးခန်း၊ ထမင်းစားခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ လေအေးပေးစက် ငါးလုံးအသင့်တပ်ဆင်ပါရှိသည်။
ကွန်ဒို၏ လစဉ်ငှားရမ်းခ - ဒေါ်လာ ၂၅၀၀ (ညှိနှိုင်း)
ရွှေတောင်ကြားရှိ ငှားရန်ကွန်ဒို (ID-666)
အမည်: Condo Rent in Golden Valley (ID-666)